Dalka Somaliland marka aan kula yeesho taladiisa iyo... | POHSOMEV.COM
Dalka Somaliland marka aan kula yeesho taladiisa iyo...
Inkasta oo aanu sidiisaba dagaal fiicnayn, oo weliba dhiig sokeeye ayaanu fiicnayn, haddana marka lagu yidhaa DALKA ILAMA LIHID......Waa sida Muse Bixi uu u dhigay, ee ku cad dawladdiisa ka tarjumaysa......talada annaga uun baa iska leh. Miyaanan anna xaq u lahayn in aan idhaahdo, ' waayahaye difaaco oo kuwa aad sadbursiiyaha siisay ha kuu difaaceen.
Sidaa marka aan leenahay amma aan u fakaraynaa maaha sidii la reer Somaliland isku ogaayeen, ee waa sida immiga taagan ee aan ku niyad jabay Muse Bixina ku hoggaaminayo dalka, in badan oo innaga mid ahn ka fogeysey magaca Somaliland. Mase garan waayin in aan taageero hadalka Suldaan Saleebaan ee ku qotoma masiirkii aan isla ogayn ee Somaliland.
Suldaan Saleebaan oo ah oday dhaqameed guun ah, ruug caddaadi ahina waxa uu indhaha iska qabtay dhaqanka Muse Bixi ee isugu jira bahdilka, cadaawadda iyo kala ogaynta reeraha ku bahoobay Somaliland. Sidii kale waxa uu og yahay in uu Muse Bixi dadkiisii indhaha ka laliyey oo uu aar-goosi dartii taladii dalka waxba ka siin waayey. Hadalkiisuna waxa uu ciil ku gadhoodhiyey in badan oo dadkiisa ah, walaalaheenna reer Puntland ah amma in badan aan ood wadaagta nahay. Somaliland iyo Puntlandna midna maanta uma habboona in uu dagaal ku fakaro. Laakiin hadalka Suldaanka wax badan ayaa ka run ah.
This post has been viewed 200 times.